Puntland oo soo bandhigtay baaritaanka dilkii Guddoomiyihii G.Nugaal. | Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Puntland oo soo bandhigtay baaritaanka dilkii Guddoomiyihii G.Nugaal.
Puntland oo soo bandhigtay baaritaanka dilkii Guddoomiyihii G.Nugaal.
29-kii Bishii Maarso ee sanadkaan ayaa qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Garoowe ee Xarunta gobolka Nugaal waxaa lagu dilay Alle ha u naxariistee Guddoomiyihii Gobolka Nugaal Cabdisalaan Xasan Xirsi (Gujir), waxaana Puntland Lix Bilood kadib ay soo bandhigtay baaritaanka kiiskaasi dilka ah.
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Ciidamada Qalabka sida iyo Danbiyada Culus ee Puntland ayaa sheegay in kiiskaasi baaritankiisa uu soo geba-gaboobey, isla markaana ay hayaan dad loo qabtay weerarkaasi qaraxa ahaa, dhawaana soo bandhigi doonaan sida uu u dhacay falkaas.
Waxaa uu sheegay guddoomiyaha in dadka kiiskaasi loo haayo ay ku jiraan gacanta Hay’adaha Amniga Puntland dhawaana ay u gudbin doonaan Hay’adaha Garsoorka si ay u Maxkamadeeyaan wallow uusan sheegin tiradad dadka ay u hayaan kiiskaas.
Ugu dambeyn waxaa uu sheegay in Bulshada ku nool degaannada Puntland ay heli doonaan xaqiiqada sida uu u dhacay weerarka qaraxa ah ee lagu dilay guddoomiyihii Gobolka Nugaal Puntland Cabdisalaan Xasan Xirsi (Gujir),.
Marxuum Cabdisalaan Gu’jir, Guddooomiyihii Gobolka Nugaal ayaa ku dhintay qarax ismiidaamin ahaa oo 29-kii Bishii Maarso lagula eegtay agagaarka Saldhiga Bartamaha ee Magaalada Garowe, waxaana weerarkaasi sheegtay ururka Al-Shabaab.
Ciidamo ka socda Kenya oo Ku soo wajahan Soomaaliya
Madaxweyne Senegal oo warqdaha awoonsiga ka guddoomay danjiraha Somaliya
Taliska Booliska Garoonka Aadan Cadde oo la hoosgeeyay Saadaq Joon